Ambongadiny tsara fanapahana hety volo manify hety miaraka amina mpanamboatra sy diamondra manga diamondra | Icool
Hetezo manapaka tsara volo manify hety miaraka amin'ny visy diamondra manga
Modely ： IC-5527TG
Size: 5.5 mirefy, 27 nify
● Ity dia hety volo manify ampiasaina amin'ny barberhops na salon de volo. Ny nify dia miendrika tandindona. 5.5 mirefy, nify 27, ny tahan'ny fanesorana volo dia 25-30%.
● Ny hety dia vitan'ny mpanao asa tanana taloha efa za-draharaha, mampiasa vy 440c, kalitao mahafinaritra, maranitra ary mateza. Mety ho an'ny mpanao volo matihanina.
● Ny vy hety dia misy hamafiny ary mandray ny teknolojia fantsom-panafody japoney, ary misandoka samy hafa ny tahony sy ny lelany. Ny lafiny anatiny amin'ny ravina dia ataon'ny mpanoto rano mandeha ho azy mba hahazoana antoka fa mifanaraka ny hatevin'ny lelany tsirairay. Mandritra izany fotoana izany dia azo antoka ny tsy fitoviana amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny lalamby mpitari-dalana ao anatiny mba hiantohana ny fahatsapana mahazo aina sy ny fitoniana mandritra ny fampiasana ny hety.
● Nify fanodinana matihanina, salama tsara ny nify, malemy ny vokan'ny fanapahana, tsy mamela soritra intsony. Izy io dia mety amin'ny fanapahana volo lahy sy vavy, manapaka maranitra fa tsy mora tohina.
● Ny hety dia mampiasa volom-borona vita amin'ny CNC, miaraka amina mazava tsara ary tsy mora vahana, miantoka ny fanapahana malama. Aza manitsy ny hety amin'ny hety raha sitrakao. Ny visy malalaka na tery loatra dia hisy fiantraikany amin'ny fanidiana sy ny faharetan'ny lelany roa.
5.5 mirefy, 27 nify
Hety manify volo misy nify tandindona
Teo aloha: Gunting ho an'ny alika vy tsy miova vy ho an'ny alika
Manaraka: Hety barety fanamboarana bolo vaovao miaraka amin'ny nify antler